Global Voices teny Malagasy » Lingua: Tetikasa Fandikan-teny Antserasera Manerantany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Avrily 2018 18:15 GMT 1	 · Mpanoratra Solana Larsen Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Fiteny, Mediam-bahoaka
(Marihana fa efa tamin'ny volana Novambra taona 2011 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Efa nanontany tena ny fomba ahazoana olona am-polony hiara-hiasa amin'ny aterineto ve ianao mba hanao fandikan-teny amin'ny fiteny maro? Tao anatin'ny roa taona, nitombo ny vondrom-piarahamonin'ny fandikan-teny ato amin'ny Global Voices satria nampiditra fiteny samihafa 15 (7 fanampiny ho avy!) ary mpandika teny an-tsitrapo maherin'ny 75. Raha ny marina, talanjona amin'ny fitomboanay izahay.
Tamin'ny Desambra 2006, nanapa-kevitra hamorona tetikasa iray ahafahan'ny mpandika teny an-tsitrapo misafidy lahatsoratra Global Voices hadika amin'ny fiteny samihafa ireo bilaogera nanatrika ny fihaonambe Global Voices tany Delhi . Tao anatin'ny roa taona monja, manana tranonkala amin'ny fiteny Bangla , Frantsay , Arabo , Albaniana , Shinoa , sy fiteny maro hafa  izahay.
Leonard Chien  aoTaiwan, no mpiara-mitantana ny Lingua miaraka amin'i Portnoy Zheng . Izy no namorona ny songadina ifandraisana mandrakitra ny fivoaran'ny tetikasa, anisan'izany ny fandikan-teny voalohany amin'ny fiteny tsirairay, ny fiaraha-miasa lehibe amin'ny fikambanana hafa, ny fitantaran'ny media momba ny tetikasa, ary ny dinidinika amin'ny mpandray anjara.
Mpilatsaka an-tsitrapo vaovao no nipoitra avy amin'ny vazantany efatra manerana izao tontolo izao mba hanampy hiara-hiasa amin'ity tetikasa ity. Mailaka ho an'ny Lingua avy amin'ny mpandika teny liana te handray anjara no dingana tsotra voalohany hidirana amin'izany. Miasa mizakatena ny vondrona fiteny tsirairay amin'ny fandikan-teny, ary miara-miasa amin'ny vondrona mailaka ny rehetra mba hanapa-kevitra amin'ny fitantanana iombonana amin'ny tetikasa. Mpandika teny maro no lasa mpanoratra ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Anglisy na mifamadika amin'izany (mpanoratra lasa mpandika teny).
Claire Ulrich , izay mitantana ny Global Voices amin'ny teny Frantsay , no namorona sarintanin'ny fiarahamonina mpandika teny Lingua. (efa tsy mandeha intsony ilay sarintany)
Midira mpikambana ao amin'ny Lingua raha mahay teny Anglisy sy mahafehy ny tenindrazanao ianao ary koa manana fotoana handraisana anjara amin'izany. Raisina avokoa ny rehetra ary ahitana olona mahafinaritra ny fiarahamonina. Mandefasa mailaka aty aminay! (ao amin'ny faran’ity pejy ity). 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/15/117746/
 fihaonambe Global Voices tany Delhi: https://globalvoicesonline.org/about/annual-summits/global-voices-delhi-summit-december-2006/